ပန်ဒိုရာ: လတစ်စင်းရဲ့ ကံကြမ္မာ
ဟုတ်ဝူး.. ကောင်းကင်မှာ လူတွေကို ဒုက္ခပေးဖို့ စောင့်
Reflects really on the moon's feelings! Great to read! Go ahead!
အနော်နားမလည်ဘူး..အိအိ..။ မကြီးပန် ကဗျာအဖွင့်ပို့စ်တစ်ခု ထပ်ရေးပေးပါ..
လတစင်းထဲ ကောင်းကင်ထက်မှာ မကျန်ခဲ့ပါဘူး … ။
ဘယ်သူတွေပဲ စွန့်ပစ်သွားပေမဲ့ …
လမင်းကိုခြံရံနေတဲ့ မှိတ်တုတ် မှိတ်တုတ် ကြယ်လေးတွေလဲ ညရဲ့ ကောင်းကင်ထက်မှာ ရှိသေးတယ်။
ညဘက်မှ ထွက်တဲ့ ညဉ့်ငှက်ကလေးတွေလဲ ရှိသေးတယ်။
လရောင်ဆမ်းမှ လန်းရရှာတဲ့ ကုမုဒြာ လမျှော်ကြာ လေးတွေလဲ ရှိသေးတယ်လေ။
နတ်ဆိုး - လငပုတ်ဖမ်းအောင် လုပ်မလို့လား။
ကိုစိုးထက် - အင်း .. အဲလို တိုက်ရိုက်ယူလည်း ရပါတယ်လေ..
ရထားကြီး- အိ အိ တဲ့ ဘယ်သူ့ဆီက ရထားတဲ့ ငိုသံလဲ။
မမေ - ရှိနေကြမှာပါ.။ ဒါပေမယ့် လမင်းမှာ သူနေစေချင်တဲ့သူလို့ ရွေးချယ်ခွင့် မရှိတော့ဘူးလားဟင်။
လမင်းကိုရူးသွပ်သူအဖို့ဒီကဗျာက . . . ပေးထားတယ်နော်